Thwebula BBM 2.13.0.26 – Vessoft
BBM – a isofthiwe ukuxhumana nabangani abasebenzisa amadivaysi esekelwe BlackBerry, Android ne-iOS nhlelo. Isofthiwe kwenza ukuxhumana nabangani chat, ukushintshanisa imiyalezo yezwi bese uthumela amafayela yobukhulu elinganiselwe. BBM ikuvumela ukuthumela imilayezo kubasebenzisi multiple futhi iqhaza engxoxweni yeqembu nabasebenzisi eziningi. Isofthiwe isebenzisa indlela eziphephile yokudlulisa umyalezo esihlinzeka ubumfihlo egcwele idatha yomuntu siqu. Futhi BBM kwenza ukuvula noma ukuvala i ukufinyelela izithombe, amafayela kanye nokunye okuqukethwe for umsebenzisi.
Exchange of imiyalezo yezwi nezithombe
Uthumela umyalezo abasebenzisi multiple
Usekela ingxoxo yeqembu
Ubonisa isimo ethunyelwe
Amazwana on BBM:
BBM Ahlobene software:
English, Afrikaans, Français, Español... Skype 7.22.0.322
Chat Ukukhulumisana Voice Popular software ukushintshanisa imiyalezo futhi wenze izwi noma amakholi wevidiyo. Isofthiwe ikuvumela ukuba uthumele amafayela futhi oluhlanganisa iqoqo elikhulu Smileys.
English, Français, Español, Deutsch... Tumblr 3.8.4.2
Inethiwekhi Yokuxhumana Isicelo ezisemthethweni inethiwekhi ethandwayo social ukushicilela futhi ukubuka blogs. Futhi isofthiwe isekela ukudlala futhi exchange of amafayela ahlukahlukene abezindaba kanye namarekhodi umbhalo.